माथिल्लो दरौँदीमा तीन बाणिज्य बैंकले ७०% लगानी गर्ने » खबरहरुको एउटै केन्द्र
माथिल्लो दरौँदीमा तीन बाणिज्य बैंकले ७०% लगानी गर्ने
बिहीबार, जेष्ठ २४, २०७५ १७:५१ मा प्रकाशित !
काठमाडौँ –माथिल्लो दरौँदी १ जलविद्युत आयोजनामा तीन बाणिज्य बैंकले लगानी जुटाउने भएका छन् । जनता बैंक (JBNL) को अगुवाईमा कुमारी बैंक र सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले कुल लागतको ७० प्रतिशत लगानी गर्ने भएका हुन् ।
कूल एक अर्ब ९२ करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा तीन बाणिज्य बैंकले एक अर्ब ३४ करोड ८० लाख रुपैयाँको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने बिहीबार सम्झौता गरेका छन् ।
आयोजनामा लगानी गर्ने सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा आयोजनाको तर्फबाट निकोलस पाण्डे र जनता बैंकको क्षेत्रिय प्रमुख कल्याण विक्रम पाँडेले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
गोरखा जिल्लाको दरौदी खोलामा निर्माण हुने आयोजना कालिका ग्रुप अन्तर्गत डायमण्ड हाईड्रोपावरले प्रवद्र्धन गरेको १० मेगावाट जडित क्षमताको जलविद्युत आयोजना हो । आयोजनाबाट वार्षिक ५ करोड १८ लाख ३२ हजार ८८८ युनिट विद्युतीय उर्जा उत्पादन गर्ने छ ।
चालु अवस्थामा रहेको ६ मेगावाट दरौंदी ए को टेलरेसको पानी र दरौंदी खोलामा २० मिटरको बाँध बाँधी १४.९६ क्युसेक पानी करिब २९५० मिटर पाइप, २०२४ मिटर सुरुङ र करिब ७२४ मिटर पेनस्टक पाइपको माध्यमद्धारा विद्युत गृहमा जडित २ वटा फ्रान्सिस् टरवाइनको माध्यमले विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।
PREVIOUS POST Previous post: म्याच फिक्सिङको आरोप लागेका पूर्व कप्तान सागर थापासहित ६ जनालाई सफाइ
NEXT POST Next post: प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति ढिलाई,किन मागेन सर्बोच्चले कारण ?
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बिहीबार, जेष्ठ २४, २०७५ १७:५१
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बिहीबार, जेष्ठ २४, २०७५ १७:५१
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बिहीबार, जेष्ठ २४, २०७५ १७:५१
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बिहीबार, जेष्ठ २४, २०७५ १७:५१
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बिहीबार, जेष्ठ २४, २०७५ १७:५१